နှစ်သစ်မှာ အရာရာအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ ဒီအစီအစဉ်လေးတွေနဲ့ စတင်ကြရအောင်
17 Apr 2018 . 6:55 PM
ဒီနေ့ဟာဆိုရင်တော့ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၉ ကနေ ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်ကို မင်္ဂလာရှိရှိကူးပြောင်းသွားတဲ့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မင်္ဂလာရှိ အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ အရာရာစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ဆက်လက်ချီတက်ရမယ့် နှစ်ဦးအစ ရက်ထူးရက်မြတ်လေးပါပဲ။ နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကိုကူးပြောင်းလာပြီဆိုတော့ကာ နှစ်ဟောင်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ လွဲချော်မှုတွေ၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကို အတာရေနဲ့ဆေးကြောပြီး အသစ်အသစ်သောခွန်အားတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ချီကြရမှာဆိုတော့ နှစ်သစ်အတွက်ရော New Year Resolution လေးတွေ ချပြီး အကောင်းဆုံးနေထိုင်သွားကြရတော့မယ်မဟုတ်လား။ ဒါဆိုရင်တော့ နှစ်သစ်အတွက် ဒီအစီစဉ်လေးတွေချမှတ်ပြီး အကောင်းဆုံး တူတူ ကြိုးစားလိုက်ကြရအောင်လား။
(၁) ရငွေ၊ သုံးငွေ စိစစ်မယ်။
နှစ်သစ်မှာ အရေးကြီးဆုံးက နှစ်ဟောင်းက ကိုယ်ရှာခဲ့သလောက် ကိုယ့်အတွက် တစ်ခုခု အကျိုးရှိတာ ကျန်ခဲ့လား? အကျိုးရှိတဲ့ အရာတွေအတွက် ကိုယ်သုံးခဲ့တာလား? ဖြုန်းတီးခဲ့မိတာလားဆိုတာ သေချာပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ပါ။ ကိုယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာခဲ့ရသလောက် ကိုယ့်ဘဏ်အကောင့်လေးထဲက သုညလေးတွေနည်းနေသေးရင်၊ ကိုယ့်အတွက် ပညာ၊ဗဟုသုတ တစ်ခုခုမှ ရမလာသေးရင်တော့ မဖြစ်သေးဘူးနော်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ သုံးငွေကို အပိုကုန်ပေါက်တွေလျှော့ပြီး တစ်ကိုယ်စာစနစ်တကျသုံးတတ်ဖို့ ပြန်စိစစ်လိုက်ကြရအောင်။ ငွေယိုပေါက်တွေပိတ်နိုင်လေ ဘဏ်ထဲက ဂဏန်းလေးတွေ တိုးလာလေပါပဲ။
ကိုယ့်တစ်ကိုယ်စာအသုံးစရိတ်ကို ချုံ့ပြီးရင် တခြားသော ကိုယ့်အနာဂတ်ရှေ့ရေးအတွက်၊ အလှုအတန်းအတွက်၊ အပန်းဖြေခရီးအတွက်၊ လေ့လာချင်တဲ့ သင်တန်း၊ ပညာရပ်တွေအတွက်၊ မိသားစုအတွက် သူ့အခန်းကဏ္ဌအလိုက် ပိုက်ဆံလေးတွေ သီးသန့်စနစ်တကျ စုကြရအောင်လား။ စုကျင့်မရှိသေးသူတွေအတွက် နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားတွေထဲကလို သူ့ရည်မှန်းချက်အလိုက် ဘူးလေးတွေနဲ့ အရင်စစုကြည့်ရင် ပြည့်ပြည့်လာတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေအလိုက် အိပ်မက်တွေပြည့်ခါနီးလာမှာဆိုတော့ ပျော်စရာလည်း ကောင်းလာမှာအမှန်ပါ။
အစားတွေအများကြီး စားတာမျိုးတွေ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညှာပြီး ဒီအလုပ် နဲ့ အိမ်၊ သောက်သောက်စားစား ပျော်စရာတွေကြားမှာပဲ ပိတ်မိနေတယ်ဆို ကြာလာရင်လေးလံထိုင်းမှိုင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်လာမှာပါ။ အဲ့ဒီ့အစား ကိုယ့်ဝန်ကို တသက်လုံးထမ်းသွားရမယ့် ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဆုပြန်ချတဲ့အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် နေကြရင်မကောင်းဘူးလား? မနက်ခင်းနေရောင်ခြည်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခုန်ပေါက်ကစားရင်း၊ Gym ဆော့ရင်း ထွက်လာတဲ့ချွေးစက်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရောကိုယ်ပါလန်းဆန်းတက်ကြွလာမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တော့ ကြည်နူးစရာကောင်းနေမှာပါ။
(၄) ကိုယ့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ကွန်ယက်ကိုချဲ့မယ်။
လူဆိုတာမျိုးက ဘယ်လောက်ပဲ Introvert ဆန်ဆန်၊ ဘယ်လောက်ပဲ တသီးတခြားနေတတ်သူဖြစ်ဖြစ် အဖော်မွန်ကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ တကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့် ဘဝရဲ့ အခက်အခဲတွေအတွက်တော့ ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။အဲ့ဒါမို့ နှစ်ဟောင်းမှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေကို ပိုတန်ဖိုးထားရင်း၊ မိတ်ဆွေသစ်တွေကိုလည်း ရှာဖွေပါ။ မခက်ခဲပါဘူး အပြုံးတချက်နဲ့စတင်ရုံပါပဲ။ တစ်ယောက်တည်း အခက်အခဲကို ရင်ဆိုင်ရတာထက်စာရင် ဘေးနားက မိတ်ဆွေတွေနဲ့တူတူရင်ဆိုင်ရတာက ပိုအောင်မြင်စေနိုင်မှာပါ။
(၅) ပိုမိုရင့်ကျက်သူအဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျိုးထောင်မယ်။
အချစ်ရေးကိစ္စတွေ၊ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ၊ အလုပ်ခွင်နဲ့ စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုတွေ၊ အဖက်ဖက်က ရုန်းကန်ခဲ့ရသမျှဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုမိုရင့်ကျက်လာစေမယ့် တွန်းအားတွေပါ။ အရှုံးတွေထဲက လဲထပြီး ဘဝအတွက် တကယ်အရေးပါမယ့် အရာတွေအတွက်ပဲ စိတ်နှစ်ကြိုးစားရင်း ပိုမိုတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာအောင် သင်ယူကြမယ်လေ။
ထစ်ခနဲရှိ အမုန်းပွားစရာတွေ ကြံနေပြောနေတွေးနေမယ့်အစား ဒေါသတွေထွက်နေမယ့်အစား ကိုယ့်စိတ်ကို လေးလံစေမယ့်အရာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ချရင်း၊ ကာင်းတဲ့ အတွေးတွေးပြီး ကောင်းတဲ့အမြင်လေးကနေ စမြင်ကြည့်ရင် ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သစ်ဟာ နေပျော်တဲ့ နေ့ရက်တွေ ပိုများလာမှာ အမှန်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ အမှိုက်တွေနဲ့ ပြည့်မနေတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
(၇) မိသားစုအတွက် အချိန်ပိုပေးမယ်။
နှစ်ဟောင်းမှာ အလုပ်ခွင်၊ ပျော်စရာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ချစ်သူကြားမှာပဲ အချိန်တွေကုန်ခဲ့တာလား? ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မိသားစုအတွက် အချိန်လေးတွေ ဖဲ့ကိုပေးသင့်နေပါပြီ။ အိမ်ထမင်းစားဝိုင်းလေးကနေဖြစ်ဖြစ်၊ ဘုရားတူတူသွားကြရင်း၊ Hot Pot တူတူသောက်ကြရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အဖေ၊အမေ၊ မိသားစုနဲ့ ရင်းနှီးနွေးထွေးတဲ့ အသိုက်မြုံလေးကို ပြန်ထူထောင်ကြည့်ကြရအောင်လား? ဘဝရဲ့ ရတနာတွေဆိုတာ အနားမှာရှိတုန်း တန်ဖိုးထားတတ်ရမှာမဟုတ်လား။
စာအုပ်တွေနဲ့ဝေးနေခဲ့တာကြာပြီပဲဆိုဆို၊ ဖတ်ကျင့်မရှိသေးဘူးပဲဆိုဆို နှစ်သစ်မှာ ဗဟုသုတအသစ်တွေနဲ့ အသိဉာဏ်ပိုကြွယ်ဝဖို့ စာအုပ်တွေအတွက် အားလပ်ချိန်တွေ ဖဲ့ပေးနိုင်ကြမယ်ဆို ဗဟုသုတအကျိုးလည်းရှိ၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေလည်းဖြစ်လာမှာမို့ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပါပဲ။
(၉) လူမှုကွန်ယက်တွေ လျှော့သုံးမယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လုံး ကိုယ့်အချိန်တော်တော်များများကို Facebook, Instagram နဲ့ တခြား အပန်းဖြေစရာ လူမှုကွန်ယက်တွေက ဝါးမျိုထားပြီးပြီမလား? ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ ငွေအား၊ အချိန်အားတွေကို တစစ ဖဲ့ယူနေတဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ လျှော့သုံးဖို့ ပြုပြင်ယူကြရအောင်လား? Social Detox လုပ်ရင်း သဘာဝနဲ့ပိုမိုနီးစပ်တဲ့ကိုယ်ပြန်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးယူကြရအောင်လေ။
ပိုအောင်မြင်ဖို့၊ ရည်မှန်းချက်တွေဆီမြန်မြန်ရောက်ဖို့၊ မိသားစုအတွက်၊ ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်၊ ကိုယ့်အနာဂတ်အတွက် ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်မှာ ပိုသင်ယူရင်း ပိုလေ့လာရင်း လူသစ်စိတ်သစ်နဲ့ ကြိုးစားကြမယ်။
(၁၁) ပညာရပ်အသစ်တစ်ခု တတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားမယ်။
ဘာသာစကား၊ ဂီတ၊ အလုပ်ခွင်အသုံးတည့်ပညာရပ်တွေ စတဲ့ စတဲ့ ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်မယ့် ပညာရပ်အသစ်တစ်ခုခုနဲ့ စတင်ထိတွေ့ဖို့ ကြိုးစားကြရအောင်။ နှစ်သစ်ဟာ အရာရာစိတ်တက်ကြွနေဆဲကာလမို့ ကြိုးစားလို့အရာဝင်ဆုံးပါပဲ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ဟာ တစ်ရက်ချင်းစီကို အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝနေတော့မှာပါ။ ဘဝမှာ ဘယ်အရာမှ စတင်ဖို့ နောက်ကျသွားပြီဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အဲ့ဒါမို့ အရင်နှစ်တွေက လုပ်ဖို့ကြံရွယ်ထားပြီး မပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့ အစီစဉ်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေကို ဒီနှစ်မှာ ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ ဖြည့်စွက်ပြီး ပိုအကျိုးရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်သွားမယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ ရက် ၊လ၊ နှစ်၊ သက္ကရာဇ်တိုင်းဟာ ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တိုင်း အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ နေ့ရက်တွေဖြစ်နေတော့မှာအမှန်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေကို ဒီနေ့ကစ ကြိုးစားလုပ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
နှဈသဈမှာ အရာရာအောငျမွငျတိုးတကျဖို့ ဒီအစီအစဉျလေးတှနေဲ့ စတငျကွရအောငျ
ဒီနဟေ့ာဆိုရငျတော့ မွနျမာ သက်ကရာဇျ ၁၃၇၉ ကနေ ၁၃၈၀ ပွညျ့နှဈကို မင်ျဂလာရှိရှိကူးပွောငျးသှားတဲ့ နှဈဆနျးတဈရကျနပေဲ့ ဖွဈပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာမွနျမာလူမြိုးတှအေတှကျတော့ တဈနှဈပတျလုံး မင်ျဂလာရှိ အောငျမွငျတိုးတကျဖို့ အရာရာစိတျသဈလူသဈနဲ့ ဆကျလကျခြီတကျရမယျ့ နှဈဦးအစ ရကျထူးရကျမွတျလေးပါပဲ။ နှဈဟောငျးကုနျလို့ နှဈသဈကိုကူးပွောငျးလာပွီဆိုတော့ကာ နှဈဟောငျးမှာ ကနျြခဲ့တဲ့ အဆငျမပွမှေုတှေ၊ လှဲခြျောမှုတှေ၊ စိတျမခမျြးမွစေ့ရာတှကေို အတာရနေဲ့ဆေးကွောပွီး အသဈအသဈသောခှနျအားတှနေဲ့ ရှဆေ့ကျခြီကွရမှာဆိုတော့ နှဈသဈအတှကျရော New Year Resolution လေးတှေ ခပြွီး အကောငျးဆုံးနထေိုငျသှားကွရတော့မယျမဟုတျလား။ ဒါဆိုရငျတော့ နှဈသဈအတှကျ ဒီအစီစဉျလေးတှခေမြှတျပွီး အကောငျးဆုံး တူတူ ကွိုးစားလိုကျကွရအောငျလား။
(၁) ရငှေ၊ သုံးငှေ စိစဈမယျ။
နှဈသဈမှာ အရေးကွီးဆုံးက နှဈဟောငျးက ကိုယျရှာခဲ့သလောကျ ကိုယျ့အတှကျ တဈခုခု အကြိုးရှိတာ ကနျြခဲ့လား? အကြိုးရှိတဲ့ အရာတှအေတှကျ ကိုယျသုံးခဲ့တာလား? ဖွုနျးတီးခဲ့မိတာလားဆိုတာ သခြောပွနျဆနျးစဈကွညျ့ဖို့ပါ။ ကိုယျပငျပငျပနျးပနျးရှာခဲ့ရသလောကျ ကိုယျ့ဘဏျအကောငျ့လေးထဲက သုညလေးတှနေညျးနသေေးရငျ၊ ကိုယျ့အတှကျ ပညာ၊ဗဟုသုတ တဈခုခုမှ ရမလာသေးရငျတော့ မဖွဈသေးဘူးနျော။ ဒါဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ သုံးငှကေို အပိုကုနျပေါကျတှလြှေော့ပွီး တဈကိုယျစာစနဈတကသြုံးတတျဖို့ ပွနျစိစဈလိုကျကွရအောငျ။ ငှယေိုပေါကျတှပေိတျနိုငျလေ ဘဏျထဲက ဂဏနျးလေးတှေ တိုးလာလပေါပဲ။
ကိုယျ့တဈကိုယျစာအသုံးစရိတျကို ခြုံ့ပွီးရငျ တခွားသော ကိုယျ့အနာဂတျရှရေ့ေးအတှကျ၊ အလှုအတနျးအတှကျ၊ အပနျးဖွခေရီးအတှကျ၊ လလေ့ာခငျြတဲ့ သငျတနျး၊ ပညာရပျတှအေတှကျ၊ မိသားစုအတှကျ သူ့အခနျးကဏ်ဌအလိုကျ ပိုကျဆံလေးတှေ သီးသနျ့စနဈတကြ စုကွရအောငျလား။ စုကငျြ့မရှိသေးသူတှအေတှကျ နိုငျငံခွားရုပျရှငျကားတှထေဲကလို သူ့ရညျမှနျးခကျြအလိုကျ ဘူးလေးတှနေဲ့ အရငျစစုကွညျ့ရငျ ပွညျ့ပွညျ့လာတဲ့ပိုကျဆံလေးတှအေလိုကျ အိပျမကျတှပွေညျ့ခါနီးလာမှာဆိုတော့ ပြျောစရာလညျး ကောငျးလာမှာအမှနျပါ။
အစားတှအေမြားကွီး စားတာမြိုးတှေ၊ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ညှာပွီး ဒီအလုပျ နဲ့ အိမျ၊ သောကျသောကျစားစား ပြျောစရာတှကွေားမှာပဲ ပိတျမိနတေယျဆို ကွာလာရငျလေးလံထိုငျးမှိုငျးတဲ့လူတဈယောကျပဲဖွဈလာမှာပါ။ အဲ့ဒီ့အစား ကိုယျ့ဝနျကို တသကျလုံးထမျးသှားရမယျ့ ဒီခန်ဓာကိုယျအတှကျ ဆုပွနျခတြဲ့အနနေဲ့ ကနျြးမာရေးကောငျးအောငျ နကွေရငျမကောငျးဘူးလား? မနကျခငျးနရေောငျခွညျလေးပဲဖွဈဖွဈ၊ ခုနျပေါကျကစားရငျး၊ Gym ဆော့ရငျး ထှကျလာတဲ့ခြှေးစကျတှကေပဲဖွဈဖွဈ စိတျရောကိုယျပါလနျးဆနျးတကျကွှလာမယျ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျတော့ ကွညျနူးစရာကောငျးနမှောပါ။
(၄) ကိုယျ့ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျး ကှနျယကျကိုခြဲ့မယျ။
လူဆိုတာမြိုးက ဘယျလောကျပဲ Introvert ဆနျဆနျ၊ ဘယျလောကျပဲ တသီးတခွားနတေတျသူဖွဈဖွဈ အဖျောမှနျကောငျး၊ မိတျဆှကေောငျးဆိုတာ တကယျရငျဆိုငျရမယျ့ ဘဝရဲ့ အခကျအခဲတှအေတှကျတော့ ခှနျအားတဈခုပါပဲ။အဲ့ဒါမို့ နှဈဟောငျးမှာ ကွုံခဲ့ရတဲ့ မိတျဆှကေောငျးတှကေို ပိုတနျဖိုးထားရငျး၊ မိတျဆှသေဈတှကေိုလညျး ရှာဖှပေါ။ မခကျခဲပါဘူး အပွုံးတခကျြနဲ့စတငျရုံပါပဲ။ တဈယောကျတညျး အခကျအခဲကို ရငျဆိုငျရတာထကျစာရငျ ဘေးနားက မိတျဆှတှေနေဲ့တူတူရငျဆိုငျရတာက ပိုအောငျမွငျစနေိုငျမှာပါ။
(၅) ပိုမိုရငျ့ကကျြသူအဖွဈ ကိုယျ့ကိုကိုယျပြိုးထောငျမယျ။
အခဈြရေးကိစ်စတှေ၊ မအောငျမွငျခဲ့တဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးတှေ၊ အလုပျခှငျနဲ့ စီးပှားရေးကပျြတညျးမှုတှေ၊ အဖကျဖကျက ရုနျးကနျခဲ့ရသမြှဟာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပိုမိုရငျ့ကကျြလာစမေယျ့ တှနျးအားတှပေါ။ အရှုံးတှထေဲက လဲထပွီး ဘဝအတှကျ တကယျအရေးပါမယျ့ အရာတှအေတှကျပဲ စိတျနှဈကွိုးစားရငျး ပိုမိုတညျငွိမျရငျ့ကကျြလာအောငျ သငျယူကွမယျလေ။
ထဈခနဲရှိ အမုနျးပှားစရာတှေ ကွံနပွေောနတှေေးနမေယျ့အစား ဒေါသတှထှေကျနမေယျ့အစား ကိုယျ့စိတျကို လေးလံစမေယျ့အရာတှကေို တတျနိုငျသလောကျ လြှော့ခရြငျး၊ ကာငျးတဲ့ အတှေးတှေးပွီး ကောငျးတဲ့အမွငျလေးကနေ စမွငျကွညျ့ရငျ ကိုယျ့ရဲ့နှဈသဈဟာ နပြေျောတဲ့ နရေ့ကျတှေ ပိုမြားလာမှာ အမှနျပါ။ စိတျထဲမှာ အမှိုကျတှနေဲ့ ပွညျ့မနတော အကောငျးဆုံးပါပဲ။
(၇) မိသားစုအတှကျ အခြိနျပိုပေးမယျ။
နှဈဟောငျးမှာ အလုပျခှငျ၊ ပြျောစရာနဲ့ သူငယျခငျြးတှေ၊ ခဈြသူကွားမှာပဲ အခြိနျတှကေုနျခဲ့တာလား? ဒါဆိုရငျတော့ ကိုယျ့မိသားစုအတှကျ အခြိနျလေးတှေ ဖဲ့ကိုပေးသငျ့နပေါပွီ။ အိမျထမငျးစားဝိုငျးလေးကနဖွေဈဖွဈ၊ ဘုရားတူတူသှားကွရငျး၊ Hot Pot တူတူသောကျကွရငျးပဲဖွဈဖွဈ အဖေ၊အမေ၊ မိသားစုနဲ့ ရငျးနှီးနှေးထှေးတဲ့ အသိုကျမွုံလေးကို ပွနျထူထောငျကွညျ့ကွရအောငျလား? ဘဝရဲ့ ရတနာတှဆေိုတာ အနားမှာရှိတုနျး တနျဖိုးထားတတျရမှာမဟုတျလား။
စာအုပျတှနေဲ့ဝေးနခေဲ့တာကွာပွီပဲဆိုဆို၊ ဖတျကငျြ့မရှိသေးဘူးပဲဆိုဆို နှဈသဈမှာ ဗဟုသုတအသဈတှနေဲ့ အသိဉာဏျပိုကွှယျဝဖို့ စာအုပျတှအေတှကျ အားလပျခြိနျတှေ ဖဲ့ပေးနိုငျကွမယျဆို ဗဟုသုတအကြိုးလညျးရှိ၊ တနျဖိုးရှိတဲ့အခြိနျတှလေညျးဖွဈလာမှာမို့ တဈခကျြခုတျ နှဈခကျြပွတျပါပဲ။
(၉) လူမှုကှနျယကျတှေ လြှော့သုံးမယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ တဈနှဈလုံး ကိုယျ့အခြိနျတျောတျောမြားမြားကို Facebook, Instagram နဲ့ တခွား အပနျးဖွစေရာ လူမှုကှနျယကျတှကေ ဝါးမြိုထားပွီးပွီမလား? ဒါဆိုရငျတော့ကိုယျ့ရဲ့ ငှအေား၊ အခြိနျအားတှကေို တစစ ဖဲ့ယူနတေဲ့ လူမှုကှနျယကျတှကေနေ ရုနျးထှကျဖို့ လြှော့သုံးဖို့ ပွုပွငျယူကွရအောငျလား? Social Detox လုပျရငျး သဘာဝနဲ့ပိုမိုနီးစပျတဲ့ကိုယျပွနျဖွဈအောငျ ဖနျတီးယူကွရအောငျလေ။
ပိုအောငျမွငျဖို့၊ ရညျမှနျးခကျြတှဆေီမွနျမွနျရောကျဖို့၊ မိသားစုအတှကျ၊ ခဈြတဲ့သူတှအေတှကျ၊ ကိုယျ့အနာဂတျအတှကျ ကိုယျ့လုပျငနျးခှငျနယျပယျမှာ ပိုသငျယူရငျး ပိုလလေ့ာရငျး လူသဈစိတျသဈနဲ့ ကွိုးစားကွမယျ။
(၁၁) ပညာရပျအသဈတဈခု တတျမွောကျအောငျ ကွိုးစားမယျ။
ဘာသာစကား၊ ဂီတ၊ အလုပျခှငျအသုံးတညျ့ပညာရပျတှေ စတဲ့ စတဲ့ ကိုယျ့အတှကျ အသုံးဝငျမယျ့ ပညာရပျအသဈတဈခုခုနဲ့ စတငျထိတှဖေို့ ကွိုးစားကွရအောငျ။ နှဈသဈဟာ အရာရာစိတျတကျကွှနဆေဲကာလမို့ ကွိုးစားလို့အရာဝငျဆုံးပါပဲ။
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ မွနျမာနှဈသဈဟာ တဈရကျခငျြးစီကို အဓိပ်ါပယျပွညျ့ဝနတေော့မှာပါ။ ဘဝမှာ ဘယျအရာမှ စတငျဖို့ နောကျကသြှားပွီဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အဲ့ဒါမို့ အရငျနှဈတှကေ လုပျဖို့ကွံရှယျထားပွီး မပွီးမွောကျခဲ့တဲ့ အစီစဉျတှေ၊ ရညျမှနျးခကျြတှကေို ဒီနှဈမှာ ဒီအခကျြလေးတှနေဲ့ ဖွညျ့စှကျပွီး ပိုအကြိုးရှိတဲ့ သူတဈယောကျအဖွဈရပျတညျသှားမယျဆို ကိုယျ့ရဲ့ ရကျ ၊လ၊ နှဈ၊ သက်ကရာဇျတိုငျးဟာ ပွနျလှညျ့ကွညျ့လိုကျတိုငျး အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့ တနျဖိုးရှိတဲ့ နရေ့ကျတှဖွေဈနတေော့မှာအမှနျပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ ဒီအခကျြလေးတှကေို ဒီနကေ့စ ကွိုးစားလုပျကွညျ့လိုကျကွရအောငျနျော။